. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၅ (အပိုင်း – ၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၅ (အပိုင်း – ၁)	11
. မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၃၁-၁၀-၂၀၁၅ (အပိုင်း – ၁)
Posted by မြစပဲရိုး on Oct 31, 2015 in My Dear Diary | 11 comments
. မြတစ်ယောက် ဂဏာမငြိမ် ဖြစ်နေတာ ပိုပိုဆိုးလာသည်။
ကိုယ်နှင့် စိတ်မတွေ့ပါက အပြင်တွင် ထုတ် မဆဲ သော်လည်း စိတ်ထဲ က ကြိတ်ကြိတ်ဆဲ နေသည်မှာတော့ ကြာပြီ။
အခုရက်ပိုင်းတော့ မနေနိုင်ရင် ဝင်ဝင် ပါနေသည်။
ဟို ပုဒ်ထီး နဲ့ မငြိအောင် စကား အပြောအဆို ကို ဆပ်စလူး မဖြစ် အောင်လည်း နေရသည်။
ဒီကြားထဲ မှာ လေထဲ က ဟိုမရောက် ဒီမပါ ဆရာ/မများ ရဲ့ စကား မှာ ဖတ်ရ ခါးလှသည်။
ဒဲ့ပြောရ လျှင် အစိုးရ ကို မကြိုက်သလို နဲ့ အတိုက်အခံ ကို အပုတ်ချနေသည့် (ဦး)ဇာဂနာ ရဲ့ လေသံ ဖြစ်သည်။
ဒီအချိန်သည် ဒီမို အသားကျပြီး တစ်ခြားနိုင်ငံများ ကလို သာမာန် ရွေးကောက်ပွဲ မဟုတ် တာ ကို မသိရအောင် ဘယ်လို အရာများ က အုပ်လွှမ်းသွားသည်မသိ။
အခုလာမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ သည် လက်ရှိ အာဏာရပါတီ နှင့် အတိုက်အခံ ပါတီ တို့ အားပြိုင်ပွဲ မဟုတ်ချေ။
အာဏာကို ဆွဲကိုင်ပြီး မတရားဖိနှိပ်မှု ထားသည့် သွေးစုတ် လူတန်းစား တစ်စု ၏ ခြေထောက်အောက် မှ ရုန်းထွက် ပွဲ ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ ရုန်းထွက်ဖို့ အတွက် နည်းလမ်း တစ်လမ်းသာရှိသည်။
. ရှေ့က နေ စိတ်ဓာက်ခွန်အား အပြည့်နှင့် တွန်းထုတ် ပေးနေသည့် ခန္တာပိန်နွဲ့နွဲ့ လေး နှင့် ထို အမျိုးသမီးကြီး ကို တစ်ညီတစ်ညွတ် ထဲ ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုး ပေးကြဖို့ပင် ဖြစ်သည်။
သို့မှ သာ မကောင်းသော အမြစ် များ ရှင်းထွက် သွားမည်။
အဲဒီ နောက်မှာမှ အဆိပ်ကင်းသော မြေမှာ အပင်ကောင်း ကို စိုက်ခွင့် ရပေမည်။
ထို့အတွက် အဆိပ် တစ်စ မှ မကျန်ရလေအောင် တတ်နိုင်သမျှ တူးထုတ် ပစ်ရမည်။
မျှတ လွတ်လပ် ကာ အားကိုးလောက်အောင် ခိုင်မာသည့် တရားဥပဒေ စိုးမိုး ရေး အတွက် ပြည်သူ အများ က အရင်ဆုံး အာဏာ ကိုပြန်သိမ်းရပေမည်။
ဒါကို မြင်အောင် မကြည့်တတ်ကြဘဲ တစ်ပါတီဘဲ ကြီးစိုး သွားမဲ့ လက္ခဏာ လို့ ဝေဖန်တာတွေ၊ အာဏာရှင် နဲ့ ဘာကွာလဲ လို့ စမ်းစစ်မှု တွေလောက် အတွေးအခေါ် တိမ်လွန်းတာ မရှိ ဟု သာ ပြောလိုတော့သည်။
ဒါတွင်မက လက်ရှိ ဝိုင်းတွန်းနေသူ တွေ ကိုလဲ အသုံးမကျ ဟု စွပ်စွဲ လိုက်သေး၏။
. ပြောရရင်တော့ သူရော ကိုယ်ပါ အားလုံး အသုံးမကျ၍ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ဖြစ်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကိုယ် အသုံးမကျတာတော့ မမြင်ဘဲ သူများ ကို လက်ညိုးထိုးပြတတ် သည်ကတော့ လက်ဖျားခါရမည့် စိတ်ဓာတ်ပင် ဖြစ်လေသည်။
အခုချိန်မှာ အဓိက အာရုံစိုက်ရမည့် မဲ တစ်ပြား အတွက် ရော စိတ်ဝင်စား မှုရှိပါသလား၊ ပြင်ဆင်ထားပါပြီလား လို့ မေးချင်ပါ၏။
. နောက်တစ်ခု မှာ The Voice ဂျာနယ် ထဲက မသီတာ(စမ်းချောင်း) ရဲ့ စကား ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်စကား နဲ့ ပြန်ရေးရင် လွဲသွားနိုင်တာ ကြောင့် ပြန်ကူး ပြပါသည်။
နောက်တစ်ခုက ရွေးကောက်ပွဲကို မြင်နေတဲ့အမြင်က အာဏာရှင်ဘက်က ပါတီတစ်ခုခုက အနိုင်ရသွားရင် တစ်မျိုးဖြစ်မယ်။
ဒါမှမဟုတ်လို့ ရှိရင် ဒီမိုကရေစီဘက်က ပါတီတစ်ခုခု အနိုင်ရသွားရင် တစ်မျိုးဖြစ်မယ် ဆိုတဲ့ အင်မတန် ရိုးရိုးစင်းစင်း ယုတ္တိဗေဒနဲ့ တွက်ကြတာများတယ်။
တကယ့်တကယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ငြင်းလို့ မရတာက ဒီမိုကရေစီ ဘက်တော်သားတွေက ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီလို့ ပြောသလို
တစ်ဖက်ကလည်း စစ်အာဏာရှင် စနစ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကနေ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်က ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို အခြေပြုပြီး ပြောင်းဖို့လိုပါပြီလို့ ကြွေးကြော်ထားပြီးလည်း ဖြစ်နေတယ်။
အဲဒါတွေကို သက်သေပြဖို့လို့ အတွက်လည်း အချိန်ရောက်နေတယ်။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲက နေပြီးတော့ တိုင်းပြည် ကံကြမ္မာအတွက် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်အောင် ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်လို့ မမြင်စေချင်ဘူး။
သူ့ကို ကြည့်ရတာ သူများ တွေ ကို “အင်မတန် ရိုးရိုးစင်းစင်း ယုတ္တိဗေဒနဲ့ တွက်ကြတာများတယ်” ဟုသာ လက်ညိုးထိုး နေတော့ သည်။
သူကိုယ်တိုင် မှာတော့ ဒီ ပွဲ ကို သာမာန် ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခု ဟူ သာ စိတ်ထဲ ရှိပုံ ရ၏။
တစ်ဖက် က လက်ရှိ အစိုး ရ၏ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ကိုလဲ သိက္ခာရှိတဲ့ သာမာန်ပြိုင်ဖက် တစ်ယောက် ဟု ပုံသေနည်း ထဲ ထည့်တွက် မိ နေတဲ့ ပုံဖြစ်နေသည်။
အမှန်တော့ လက်ရှိ အစိုးရ ဟာ သူတို့ ရှုံး မှာ ကို ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကြောက် နေကြ လဲ ဆို တဲ့ အကြောင်း ကို မြင် လိုက်ဖို့ ကြိုးစားသင့်သည်။
လက်ရှိ အခြေအနေ မှာတင် ကြောက်ဖို့ ကောင်းလောက်အောင် ငါ တကော ကော နေကြ သော လုပ်ရပ်များ ကို လေ့လာဖို့ ကောင်းသည်။
သူတို့ စကားများ သည် အတိုက်အခံ ဒီချုပ် ကို ရ သလို အပုတ်ချချင်သည့် ဆရာကြီး များ သဘောကျ ဖြစ်နေလာတော့သည်။
တကယ်တော့ သူတို့ ထိပ်ပိုင်း အသိုင်းအဝိုင်း ထဲ မှာတင် ဗိုက်ပြဲပြီး အန်ထွက် မတတ် စားထားတာ တောင် ရပ်လိုက်ဖို့ ဆင်ခြင်ဉာဏ်စွမ်း အားနည်း သူများ ကို ကြည့်ပြီး အချင်းချင်း စိတ်ပျက်နေသူ များ ရှိပါသည်။
ဒီလို အခြေအနေ တွေ ကို မမြင် ဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံ က လာ မဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကို ဒီမိုကရစီမှာ အသားကျ နေပြီး ဖြစ် တဲ့ သူများ နိုင်ငံ က ရွေးကောက်ပွဲ များ နှင့် ယှဉ်ပြီး စကားလုံး ကြီးကြီး များ မသုံး စေလိုပါ။
ယှဉ်ပြ လိုပါက တရားဥပဒေ မဲ့ ပြီး ချစားကာ ကိုယ့်တစ်ဘို့ထဲ ကြည့်တဲ့ အစိုးရကြီးစိုး တဲ့ နိုင်ငံ များ ကို လေ့လာပြီး ပြောကြစေလိုသည်။
ဒါတောင် မှ ကိုယ့်နိုင်ငံ သည် ထိုသူများက ပင် ဆရာတင်ထား ရမဲ့ ညစ်လုံးများ ကြွယ်ဝသည့် လူတန်းစား ကြီးစိုးနေသည် ကို မမေ့ကြပါနှင့်။
(ပြော၍ မပြီး သေး စကားများ ကို ဥ ထားတာ ကြာပြီမို့ အပိုင်း (၂) ကို ဆက် ဦးမည်) :-)))
ဇီဇီခင်ဇော် says: သဘောမပေါက်ကြသေးးတာလားးး
ပညာရှင်တွေလို့ ယူဆရတဲ့ သူတွေပါ..
ဒီ အချိန်ထိ Swing နေကြဖို့ ကြိုးးစားးတုန်းးထင်ရဲ့…
သူများးနိုင်ငံရွေးးကောက်ပွဲတွေလို အကောင်းးတကာ့ အကောင်းးဆုံးတွေ ယှဉ်ရွေးး နေရတဲ့ ဘဝတွေ မဟုတ်ဘူးးး
ကဘာ့ အာဏာရှင် စာရင်းးဝင် အစိုးးရလက်ကနေ ကဘာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးး အိုင်ကွန် လက်ထဲ နိုင်ငံ ရောက်ဖို့ လုပ်နေရတာ..
လူများး ကို ဝေဝါးးအောင် လုပ်နေတာတွေ ရပ်သင့်ပြီ …
naywoon ni says: အ​ဟောင်း အကုန်​ဖြုတ်​နိုင်​မှ အဟုတ်​တစ်​ကယ်​ ​ပြောင်းနိုင်​မှာပါ
ဦးကြောင်ကြီး says: ရွေးဂေါက်ပွဲ လမ်းဂျောင်းဗေါ် ပုံအောတဲ့ ဒီချုပ်အနေနဲ့ ၂၀၁၅အလွမ် နိုင်ငံလျေးတိုက်ပွဲကို တာဝန်ခံရပါမည်။ ပီးဂဲ့ဒဲ့ ၃နှစ်တာ အားထုတ်မှုမှာတော့ အားလျဆြာ ဝလုံးမရှိ။ အခြေအနေ လုံးဝမကောင်းဘူး…..။ အမေစု အမေစုနဲ့ ဘေးကင်းလျံကွာ နိုင်ငံရေးလှုပ်လိုသူ သပ်ချောင်မြှား၊ ပြင်ညာရှင် စိုသူမြှား၊ ခါတော်မှီ တပ်ကျွလှုပ်လျှားသူမြှား အယေးကြုံလာယင် (လာလှည်းလာတော့မှာပါ) အမေစုကို ပစ်မသွားဘူးလို့ ယုန်ကျီးပါဒယ်။
မြစပဲရိုး says: ဇီကလေး – အရီး လဲ ဒါကို စိတ်တိုတာဘဲ။ တစ်ချို့ က နိုင်ငံရေးစကား ပြောတာ ကိုယ့် အတ္တ အတွက် ပြောနေတာ ဖြစ်နေပြီ။
အဘနီ ရေ – မှန်ပါ့။ သို့သော်လည်း ညစ်ပတ်တာ တွေ ပိုပို များလာနေတာ ထင်ကို မထင်ခဲ့ဘူး။ စိတ်ဓာတ်တွေ တကယ်ကြောက်စရာပါ။
ကိုယ်ကျိုးလုပ်ပြီး အတ္တ တွေ နဲ့ စားရတဲ့ ထမင်းလုပ် က ပိုပြီး အရသာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အများအတွက် ကြိုးပမ်းရင်း စားရ တဲ့ ထမင်း လုပ် က ထမင်းကြမ်း ဖြစ်ဦး စိတ် ခံစားရ တဲ့ ပီတိခြင်း ကွာတာကို နားလည် သွား တဲ့သူတိုင်း ကိုယ်ကျိုး ကို ရှေ့တန်းတင်တော့ မှာမဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဘဝ ဆိုတာ တိုတို လေးပါဘဲ ကြောင်ကြောင် ရယ်။ အခု တောင် သင်ခန်းစာ ယူတတ်ရင် ဘဝ နေနည်း ဆိုတာ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ပါတယ်။
ဒါထက် နီ သာဆို လက်ရှိ ဦးသိန်းစိန် နေရာ မှာ နေမလား။ အဖြေ တော့ ရှိတယ်ဟုတ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: လက်ရှိအခြေအနေအရ.. တပ်က.. ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်လက်ခံမယ်… အာဏာမသိမ်း..
ဒီချုပ်နိုင်မလား… ဆိုတော့…. နိုင်မှာပါ…။
တပ်က… အရာရှိကြီးတွေတချို့ကိုလည်း.. ကက်ဘိနက်မှာနေရာချန်ပေးထားကြောင်း… ပြောထားသင့်တယ်..။
အနည်းဆုံးတော့… တိုင်းရင်းသားနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေတဲ့… Peace Center ထဲကသူတွေကို…ဆက်လုပ်နိုင်ဖို့.. အာမခံချက်တခုခုပေးထားသင့်တယ်ထင်တာပဲ..။
မြစပဲရိုး says: Larry Jagan ရဲ့ အပြော နဲ့ မှန်းချက် ကတော့ NLD မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုနေတာ။
ကိုယ့်ပြည် ကလူ တွေ ကလဲ ဟိုလိုဒီလို တွေ ဖြစ်နေတာ။
NLD နိုင်လို့ ကတော့ အဘတို့ အားလုံး ရှိထား ယူထား သမျှ အားလုံး ပိုက်ပြီး သာ ဆင်းကြပါ။ ပြသနာ မလုပ်ပါဘူး။
နိုင်ငံ ကို သုည က စဆိုလဲ ပြန်ပြီး စရဲ ပါတယ် လို့ ဘဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ငိုးမ အဆိုးဓမြလို့ အီနေလျှာက ယဲဝမ့်စွာ ပေါသယ်…
လုံမလေးမွန်မွန် says: သင်ပုန်းချေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး မနေ့ကပွဲမှာ ဒေါ်စုက အတိအလင်းပြောသွားပါပြီ..
သိက္ခာနဲ့ မာန တဲ့… ဒေါ်စုဖွင့်ပေးထားတဲ့လမ်းတွေကို တပ်မတော်က မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရမှာပါပဲ…
မြစပဲရိုး says: သူတို့ သိပါတယ်။ မြင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မနီး စပ်တော့ အောင် အတင်းခွါ ပစ်လိုက်တာ။
Alinsett @ Maung Thura says: အမေကတော့… တွင်တွင်လိုလို…ပြောနေခဲ့ပါတယ်..
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရလို့ရှိရင်… ရှူံးသွားတဲ့သူတွေကို အာဃာတတွေထားနေမှာမဟုတ်… အတူလက်တွဲပြီး ဒီမိုကရေစီရေးပဲ ဆက်လုပ်သွားချင်ပါတယ်…တဲ့။
အမေစုတို့ အစိုးရဖြစ်လာမှာကို ကြောက်နေတဲ့သူတွေက…အမေ့ကို သေချာမသိသေးဘူးပဲ…
အမေဟာ… သူတို့လို စိတ်ဓါတ်ခံ ကောက်ကျစ်ယုတ်မာလိမ့်မယ်လို့… (သူတို့စိတ်နဲ့) နှိုင်းနေမိတာမျိုးလားလို့…. စွပ်စွဲလိုက်ချင်တော့တယ်..။
ဟီလာရီကလင်တန်ကို ပစ်ပယ်မထားခဲ့တဲ့ အိုဘားမားရဲ့ စိတ်ဓါတ်မျိုး..အဲ့လို အတွေးအခေါ်နဲ့ လုပ်ရပ်မျိုး..
အဲ့ထက် သာတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့…လုပ်ဆောင်ချက်တွေ… အမေစု မလုပ်နိုင်ဘူးလို့များ ထင်နေသလားမသိ…. အမေစုသာ အစိုးရဖြစ်လျှင်…ဆိုပြီး…ကြောက်လန့်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့… အမေစုကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ မနှိုင်းပဲ… အမေစု ဘာလဲ…ဘယ်လဲ…ဆိုတာကို သေချာ ကြည့် မြင်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါလို့…ပြောချင်တယ်။
Mike says: .ဒီလိုလော်ဘီလုပ်လာသူလည်းရှိရဲ့…
ရွေးကောက်ပွဲအတွက်နောက်ဆုံးဘာအတွေးရှိသလဲမေးလာလို့ လုံးဝကိုးကားချက်မရှိပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုလေးကိုတော့ မျှဝေချင်တယ်။ ဒီတခါကတော့ လော်ဘီစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။
တနိုင်ငံလုံးအတုိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင် ကောင်းမွန်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားပဲ ၊ ဒါပေမယ့် ဖြူးဆိုတဲ့မြို့သေးသေးလေးအတွက် ဖြုးရဲ့ဒေသခံကို နည်းနည်းလေးအကြံပြုချင်တယ်။ ဖြူးနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း တကယ်လို့သဘောကျရင်ပြောပေးပါ ။
တက်လာမယ့်အစိုးရ အရေးကြီးတာဝန်တခုဖြစ်တဲ့ ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်တဲ့ လူကြီးတယောက်ကိုမဲပေးပါ ။ နုိုင်ငံရေးပညာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် လူထုပြောနေကျ လူအုပ်စုတစုထဲမှာ အရင်စနစ်ကိုဆက်ပြီးထိန်းချုပ်တဲ့သူရှိသလို ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုလားသူလည်း ရှိပါတယ်။ Reformer အဖွဲ့ပေါ့။ ဒီလူတစုလုံးကြီး ကိုယ့်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မဖြစ်အောင် သင့်ရဲ့မဲပြားတပြားက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအဖွဲ့ကို အားပေးရာရောက်တယ် ။ အင်အားကြီးစေတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တယောက်တည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို မနှောင့်နှေးစေပါဘူး ။ ဒါပေမယ် ဒီကိုယ်စားလှယ်တယောက်သာ reformer အင်အားစုရဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် ၊ အားကိုးရာတခုလည်းဖြစ် ၊ ဒီလူထုဘက်ကလာပြီးပေါင်းစည်းနုိုင်တဲ့အဖွဲကိုအင်အားပိုမိုကြီးထွားလာအောင် သင့်ရဲ့မဲတပြားကို သေချာစဉ်းစားပြီး အပြုသဘောဆောင် ပေးလိုက်ပါ ။ တက်လာမယ့်အာဏာရပါတီအတွက် ရိုးရိုးပါတီကိုယ်စားလှယ် တယောက်ထက်စာရင် ဒီလူကြီးကပိုအထောက်အကူပြုနုိုင်တယ် လို့ယူဆတယ်။
ကျွန်တော်တုို့ဖယ်ဒရယ်စနစ်အကြောင်းရှငိးပြတဲ့အချိန်မှာ ဒီိလူကြီးကကျွန်တော်တို့ဖယ်ဒရယ်စနစ်ကို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းတာနဲ့တူလို့ အမြင်မှားခဲ့တယ်။ အခု ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တမျုိုးသိသွားတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဖယ်ဒရယ်အတွက် ကြိုးစားသွားမှာပါလို့ သူကပြောဆိုခဲ့တယ်။ နောက်တခါမှာ တစ်ဒေါ်လာ ခြောက်ကျပ်နှုန်းစနစ်ရုပ်သိမ်းချိန် ဘယ်လောက်နဲ့သတ်မှတ်တာ ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပတဲ့အချိန်မှာ ၊ IMF နဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှပညာရှင်များထံ အကြံတောင်းတဲ့အချိန်မှာ ပြင်ပပေါက်ဈေးအတိုင်းဖြစ်သင့်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့တယ်။ ဒီလူကြီးကပဲ ပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းနည်းပိုပြီး ၁၂၀၀ လောက်သတ်မှတ်ရင် ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့exportသမားကို အားပေးရာရောက်တယ် ၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတော့နည်းနည်းထိတာပေါ့ (အဖြုန်းလျော့စေတယ်) ၊ ဒေါ်လာဈေးကို ၁၂၀၀ လောက်သတ်မှတ်ရင်ပိုသင့်တော်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ (ဟိုအချိန်မှာဒီမုိုကရေစီမီဒီယာများက သူ့သားနဲ့ပက်သက်တဲ့ဘဏ်လုပ်ငန်းများကောင်းစားဖို့သာ ဖြစ်တယ်လို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်အခုလို ၃ နှစ်လုံး လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးချိန်မှာ တကယ်လို့သူပြောတဲ့အတိုင်းသတ်မှတ်ခဲ့ရင် ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ ပို့ကုန်အပိုင်း အခုထက်ပိုပြီးဖွံဖြိုးမယ် ၊ ဒေါ်လာဈေးလည်း ၁၂၀၀ မကျော်နုိုင်တဲ့အပြင် အခုဆို ၁၁၀၀ စွန်းစွန်းလောက်ဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာတခုက နိုင်ငံသိုလှောင်ငွေ ဒေါ်လာသန်းသောင်းနဲ့ချီမပျောက်ကွယ်သွားဘူးပေါ့။ နောက်တချိန်မှာပဲ အခြေခံဥပဒေကိုတနိုင်ငံလုံးကပြုပြင်လိုစိတ် ရှိတဲ့အချိန်မှာ ဒီလူကြီးပဲ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ထောက်ခံမဲပေးခဲ့လို့ စနစ်ဟောင်းထ်ိန်းသ်ိမ်းလိုသူများ (conservatives) ဘက်ကဝေဖန်ချက်များခံခဲ့ရတယ် စသဖြင့် ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလမ်းစဉ်မှာ ဒီလိုသတ္တိရှိ ၊ အမြော်အမြင်ရှိ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူလိုအပ်ပါတယ်။ (ဒီစိတ်ကူးယဉ်လေးသဘောကျခဲ့ရင် ဖြူးဒေသခံရဲ့မဲကို ဒီလူကြီးကိုပေးဖို့လော်ဘီလုပ်ပေးပါ ) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.